ShweMinThar: August 2011
၀က်နံရိုးကြံမဆိုင်ဟင်း၊ ပဲပုပ်သုပ်၊ ငရုတ်သီးထောင်း၊ ခရမ်းကြွပ်သီး တို့စရာ
၀က်နံရိုး - ၅၀ကျပ်သား (နှစ်လက်မအရွယ် အတုံး တုံး၍ရေဆေးပြီး ဆား၊သကြား၊နနွင်း နယ်ပါ)
ကြက်သွန်နီ - ၄ ဥ(ရေဆေးပြီး အကွင်းလိုက် မထူမပါး လှီးထားပါ)
ချင်း (ဂျင်း) - လက်တစ်ဆစ် (မညက်တညက် ထောင်းပါ)
ကြံမဆိုင် - နှစ်ဆယ်သား (တစ်လက်မအရွယ် ပိုင်းဖြတ်ထားရန်)
ဟင်းစချက်မယ်ဆိုရင် ဆီပူအိုးထဲတွင် နနွင်းမှုန့်နဲ့ ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်များ၊ ဂျင်းများ ထည့်ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်များ ရွှေဝါရောင် သန်းလာရင် ၀က်နံရိုးနှင့် အချို၊ အငန်များထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေကို သင့်တင့်ရုံထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်တည်ပါ။ ၀က်နံရိုး များ နူးတဲ့အထိ တည်ပေးရပါမယ်။ ၀က်နံရိုးနူးပြီဆိုမှ ကြံမဆိုင်အဖတ်နှင့် ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပြီး ဟင်းရည်ဆူလာတဲ့အထိ ချက်ပါ။ ဟင်းရည်လည်းဆူလာပြီး ကြံမဆိုင်အဖတ်လည်းနူးသွားရင် အရသာမြည်းကြည့်ကာ မီးဖိုပေါ်မှချလို့ရပါပြီ။ ၀က်နံရိုး ကြံမဆိုင်ဟင်းကို နနွင်းဖြင့် အ၀ါချက်ပဲ ချက်စားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ထည့်မထားတာပါ။
၀က်နံရိုး ကြံမဆိုင်ဟင်းနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ပဲပုပ်သုပ်နဲ့ ငရုပ်သီးထောင်းကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ရှမ်းပဲပုပ် - ၁၀ချပ် (မီးဖုတ်ပြီး အရွယ်တော်ချေထားရန်)
ကြက်သွန်နီ - ၂ ဥ (ရေဆေးပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ)
ပဲဆီမွှေး - ၅ကျပ်သား
ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲတွင် ခြွေထားတဲ့ ပဲပုပ်များ၊ ကြက်သွန်နီ၊ အချို၊ အငန်နှင့် ပဲဆီများ အားလုံးထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပြီးရင် စားသုံး လို့ရပါပြီ။
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅ကျပ်သား (အညှာခြွေ ရေဆေး၍ ကျက်အောင် ပြုတ်ထားပါ)
ပုစွန်ခြောက်မှုန့် - နှစ်ကျပ်ခွဲသား
ကြက်သွန်ဖြူ - ၁၀မြွှာ (ညက်အောင် ထောင်းထားပါ)
ငရုတ်ဆုံထဲတွင် ကျက်ပြီးသား ငရုတ်သီးစိမ်းကို ညက်အောင်ထောင်းပါ။ ပြီးရင် ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆား၊ သကြား များကိုထည့်ပြီး သမအောင် ဆက်ထောင်းထားပါ။ သမသွားပြီးရင် ပန်းကန်ထဲ ဆယ်ထည့်ပါ။
ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ခရမ်းကြွပ်သီး လေးစိတ်ခွဲ၊ ကန်စွန်းရွက်ပြုတ်တို့နှင့်လည်း တို့စားလို့ရပါတယ်။
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုသလိုပါပဲ။ ၀နေလို့ ပိန်ချင်တဲ့လူရှိသလို ပိန်သေးလွန်းနေလို့ ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့သူတွေ လည်း အများကြီးပါပဲ။ ရှိနေတဲ့အရပ်နဲ့ ရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်မရှိဘဲ ရှိသင့်တာထက် လျော့နည်းနေသူများအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၀ချင်သူတွေအနေနဲ့ အစားအသောက်ကို ရွေးချယ်စားသောက်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၀ချင်လို့ အစာစားတဲ့နေရာမှာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာကို ရွေးချယ်စားသောက်တတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆီကြော်မုန့်နဲ့ အဆီများတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ပြီး လှော်ထား၊ ဖုတ်ထားတဲ့မုန့်တွေ၊ မွှေကြော်ကြော်ထားတာမျိုးနဲ့ ရေလုံပြုတ်တဲ့ အစား အသောက်တွေကို ရွေးချယ်စားသောက်တတ်ရပါမယ်။
အန္တရာယ်မရှိဘဲ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေဖို့အတွက် ပရိုတင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်နဲ့ အဆီတွေကို အချိုးညီညီ ပေါင်းစပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အစားအသောက်မစားဘဲနဲ့တော့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ပရိုတင်းမြင့်မားတဲ့ အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အဟာရရှိစေတဲ့ အစားအသောက်တွေကသာ ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေဖို့ အမှန်တကယ် အထောက်အကူပြုမှာပါ။ နေ့စဉ် ပရိုတင်းဓာတ်ကနေ ကယ်လိုရီ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်ကနေ ကယ်လိုရီ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အဆီစားသုံးမှုအတွက်ဆိုရင် အဆီကရရှိတဲ့ ကယ်လိုရီဟာ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း အထိပဲ စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
တူနာငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ပင်လယ်ငါးများ၊ ကြက်ဆင်၊ ကြက်၊ အနီရောင်အသားများ၊ ချိစ်၊ နို့၊ အဆီနည်းဒိန်ချဉ်၊ ကြက်ဥ၊ ပဲ၊ အစေ့ အဆန်များ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ ၀က်ပေါင်၊ ၀က်သား၊ ခရုအစရှိသော အခွံမာရေနေသတ္တ၀ါများ၊ သိုးသား၊ တိုဟူး၊ ဂျုံ၊ ကြက်ဥ၊ ပဲနို့၊ ဒိန်ချဉ်အရည်ကြည်တို့ကို စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
အသီးအနှံများ၊ ဆန်လုံးညို၊ အာလူး၊ ပေါင်မုန့်အမာ၊ပါစတာ၊ ကောက်နှံပင်ကရရှိတဲ့ အစားအသောက်များ၊ ဘရိုကိုလီ၊ ပဲစိမ်း၊ ပြောင်းဖူးနဲ့ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ကို စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီ၊ မြေပဲ၊ မြေပဲထောပတ်၊ ဗာဒံစေ့၊နေကြာဆီ၊ ဂုန်လျှော်စေ့အဆီ၊ ထောပတ်သီး၊ ဆူးပန်းဆီ၊ ငါးအဆီ၊ Walnuts တို့ကို စားသုံး နိုင်ပါတယ်။ အဆီဆိုရာမှာ ပြည့်ဝဆီတွေကို မစားသုံးရပါဘူး။ ပြည့်ဝဆီတွေ စားသုံးလွန်းရင် နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင် ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် တက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ သရေစာတွေ စားသုံးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သရေစာတွေကို တစ်နေ့တာလုံး စားသုံးနိုင်ဖို့ သယ်ဆောင်သွားပါ။ ပန်းသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ မီးဖုတ်ထားတဲ့ (သို့မဟုတ်) လှော်ထားတဲ့ အာလူး ချောင်း၊ အငန်ဓာတ်ပါတဲ့ ဘီစကွတ်မုန့်နဲ့ ဒိန်ချဉ်တို့ကို စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပြင် ပါစတာ၊ ကွတ်ကီးတို့ကိုလည်း စားပေးပါ။ Sandwich ထဲကို အဆီနည်းချိစ်တွေနဲ့ ထောပတ်သီးစိတ်လေးတွေ ထည့်စားတာမျိုး ပြုလုပ်ပေးပါ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အစာစားချင်စိတ် နည်းတယ်ဆိုရင် မကြာခဏ စားသုံးပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ စားသမျှထဲမှာ သင့်တော်တဲ့ကယ်လိုရီ ပမာဏကို ထည့်သွင်းစားသုံးပေးရပါမယ်။ ဥပမာ - နံနက်စာမှာ အစေ့အဆန်တွေ ထည့်သွင်းစားသုံးတာမျိုး၊ အသားကင်နဲ့ ပေါင်မုန့် တွေထဲမှာ ထောပတ်များများ ထည့်စားတာမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အစားအစာတွေ အများကြီး စားချင်စိတ်မရှိတဲ့အတွက် စား နိုင်တဲ့အစားအသောက်ထဲမှာပဲ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုများအောင် စားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည့်ဝဆီ၊ ကယ်လိုရီနဲ့ သကြားတွေအများကြီး စုပုံများပြားတဲ့ အစားအစာတွေကိုတော့ ချင့်ချိန်စားသုံးရမှာပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက်နဲ့ အဆီနည်းတဲ့အသားတွေကို ထမင်းစားတိုင်း ထည့်စားပေးပါ။ ဂျုံဖြူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ မုန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အဆီ (ဥပမာ - သံလွင်ဆီ) တစ်မျိုးမျိုးကို အစာတစ်နပ်နဲ့တစ်နပ်ကြားမှာ အဆာပြေအဖြစ်စားသုံးပေးပါ။ ပြောင်းဖူးနဲ့ အာလူး ကို ပိုစားပေးပါ။
နို့၊လိမ္မော်ရည်နဲ့ တလည်းသီး(သလဲသီး)ဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးပေးပါ။ သကြားများတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်ပါ။ ဆိုဒါနဲ့ လက်ဖက် ရည် အချိုတွေကို မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ ဖျော်ရည်တွေကို နေ့လယ်စာ၊ ညစာစတဲ့ အစားကြီးစားချိန်တွေမှာ တွဲဖက်မစားသုံးသင့်ပါ ဘူး။ ဖျော်ရည်တွေ သောက်တဲ့အတွက် ခဏလေးနဲ့ ဗိုက်ပြည့်စေပြီး ကယ်လိုရီဝင်ရောက်မှုနှုန်းလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဖျော်ရည် သောက်မယ်ဆိုရင် မနက်စာနဲ့ နေ့ခင်းစာကြား၊ နေ့ခင်းစာနဲ့ ညစာမစားမီ ကြားအချိန်တို့မှာ သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်ပျစ် ပျစ်တွေဟာ စွပ်ပြုတ်ရေကြည်တွေထက် ကယ်လိုရီပိုမိုများပြားပါတယ်။ စွတ်ပြုတ်ပျစ်ပျစ်တွေထဲကို နို့မှုန့်တစ်ဇွန်း ထည့်စားပေးမယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာစေဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေဖို့အတွက် အစားအသောက်သာ မက လေ့ကျင့်ခန်းတွေကလည်း အရေးပါလှပါတယ်။
ကြွက်သားအလေးချိန်ဟာ အဆီထက် ပိုမိုအလေးချိန်စီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြွက်သားတွေကို သန်မာတောင့်တင်းစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို များများပြုလုပ်ပေးနိုင်လေ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လေပါပဲ။ ကြွက်သားတွေ သန်မာထွားကျိုင်းလာတဲ့အခါ အရိုး၊ အဆစ်နဲ့ အတွင်းအင်္ဂါတွေကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရစေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သားသန်မာထွားကျိုင်းစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို (၃)ကြိမ် လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။ ကြွက်သားအစိတ်အပိုင်း တစ်မျိုးချင်းစီအတွက် လေ့ကျင့် ခန်းတစ်မျိုးစီ ခွဲလုပ်ပေးတာက ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်။ ဒါမှ မနေ့ကလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ထားတဲ့ ကြွက်သားအစိတ်အပိုင်းကို အနားပေးပြီး သားဖြစ်မှာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း (၈)ခုမှ (၁၀)ခုအထိ အလှည့်ကျလေ့ကျင့်ပေးပြီး (၈)ကြိမ်မှ (၁၂)ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ အလေးမ ခြင်းဟာ ကြွက်သားတွေကြီးထွားလာဖို့ အကူအညီပေးတဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။
ဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့ Nutrition Shakes တချို့ကို သောက်သုံးပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ (ဥပမာ - Appeton Weight Gain, Ensure နဲ့ Boost) ပဲနို့နဲ့ ပရိုတင်းပြည့်ဝတဲ့ နို့တို့ကို သောက်သုံးပေးပါ။
တချို့သော တိုင်းရင်းဆေးတွေဟာလည်း အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ သွေးဆေး၊ချက်ဆေးနှင့် လျက်ဆားတွေ စားသုံးပေးရင်လည်း အစာစားချင်စိတ် ပိုမိုဖြစ်ပေါ် လာစေပါတယ်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာ ၀ိတ်တက်ချင်သူတွေအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:31 AM No comments:
ဧရာဝတီမြစ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လေးစားအပ်ပါသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရှင့်
August 21, 2011 ရက် ၊ 10:00pm တွင် khin mg sun ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။
ကျမသည် ဧရာဝတီမြစ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တချို့ သော မြစ်တို့ တွင် ဆောက်လုပ်ဆဲ / ဆောက်လုပ်မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက် ထမ်းဆောင်ရမည့် အမျိုးသားရေးတာဝန်ကိုဦးထိပ်တွင်ပန်ဆင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော လူသန်းပေါင်း ၆၀ကျော်တို့ ၏ကိုယ်စား ၊ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန်သော သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံး ကိုယ်စား သမ္မတကြီးထံသို့ ဤ စာအား Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ရေးသားပေးပို့ လိုက်ပေသည်။
(၁)ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် သန်းပေါင်း ၆၀ကျော်သော ပြည်သူတို့ တွင်ရရှိခံစားနေရသည့် ယခုလက်ရှိ ဆောက်လုပ်ဆဲ/ ဆောက်လုပ်မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းများနှင့် ဆက်လျဉ်း၍ မလိုအပ်သော စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု များကို ဖယ်ရှားရန်
(၂)ရေမြေတောတောင်တို့ ၏ စိမ်းလန်းသာယာလှပမှုဖြင့် တည်ဆောက်ထား၍ ပင်ကိုယ်သဘာဝရေခံမြေခံကောင်း သဖြင့် လူပေါင်းများစွာ၏ ဘဝရပ်တည်မှုအား အပြည့်ဝဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော နေရာဒေသဖြစ်ကြောင်းကို ရှေးယခင်ကတွေ့ ရှိခဲ့ကြသဖြင့် ဘာသာစကားနှင့် ကိုးကွယ်မှုမတူညီသည့် လူမျိုးစုပေါင်းများစွာ စုဝေး နေထိုင် ရောက်ရှိနေထိုင်လာခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စုဟူ၍ နေရာဒေသတခုတိတိကျကျဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုမှ တဆင့် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်၍ ယခုအချိန်အခါတွင် လူသန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်ပိုင်ဆိုင်သော " မြန်မာနိုင်ငံ " ဟု အမည်နာမတွင်ခဲ့သည့့် ထိုပြည်ထောင်စုကြီးအား တို့ တာဝန် အရေးသုံးပါးထဲမှ တပါးဖြစ်သည့် "ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး" ဆိုသည့်အချက်ကို လိုက်နာကျင့်သုံး၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်
(၃)ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတရွေးချယ်ပွဲတွင် ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရသောသမ္မတကြီးသည် ဘုရားဟောကြားခဲ့သော မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးအား ဦးထိပ်တွင် ပန်ဆင်၍ ပြည်သူများအား တရားမျှတစွာ အုပ်ချုပ်သည့်မင်း/ သမ္မတ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိနား လည် သော ပြည်သူ သန်းပေါင်း ၆၀ကျော်၏ ခိုင်မာသည့်ယုံကြည်မှုကို ဆက်လက်မြင့်တင်ပေးရန် ....
စသည့် အချက် များပင်ဖြစ်သည်။
(၁)ကျမ၏လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာအတွေ့ အကြုံ
(၂)တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ဆောင်းပါးများ နှင့် လူမှုကွန်ယက်များမှ ထွက်ပေါ်လာသော ပြည်သူ့ အသံများ.
(၃)နိုင်ငံသားတယောက်၏ နိုင်ငံသားတာဝန်ကျေပွန်လို သော အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်
စီမံကိန်းစာမျက်နှာများအား တိတိကျကျ ဖတ်ရှုနိုင်ခွင့် မရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း ၊ ဖတ်ရှုခွင့်ရမည့်အခြေအနေ အားလဲ စောင့်ဆိုင်းနေရန် လုံလောက်သည့် အချိန်မရှိတော့သောကြောင့် လည်းကောင်း ၊ ကျမရေးသားပေးပို့ သောဤစာထဲတွင် မူရင်းစီမံကိန်း စာချုပ်နှင့် လွဲဖယ်မှုများပါရှိနေပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် သမ္မတကြီးအား ပဏာမအနေနှင့် ဂါရဝရှေ့ ထား၍ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ပြည်သူသန်းပေါင်း ၆၀ကျော်သိချင်သော အရေးကြီးသည့် အချက်များကိုသမ္မတကြီးအား တင်ပြရာတွင် လက်တလော ပြည်သူများ အာရုံစိုက်မိနေသည့် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ဥပမာထား၍ တင်ပြလိုပါသည်။
(၁)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမု၊ အကျိုးအမြတ်ရလာဒ်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုး ခွဲဝေရှင်းတမ်း (Project Cost and Profit & Loss Ratio)
(၂)နိုင်ငံတခုနှင့်တခု စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးများအားလုံးအတွက် အပြည့်အဝ ပြန်လည်အစားထိုးပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် အာမခံချက် ( Political Risk Insurance )
(၃)ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင်ထားရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့် တိုက်ရိုက်မပတ်သတ်သော သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေး အာမခံချက် ( Banker's Guarantee from World Bank )
(၁)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊အကျိုးအမြတ်ရလာဒ်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုး ခွဲဝေရှင်းတမ်း ect Cost and Profit & Loss Ratio)
ဤအချက်မှာ တိုင်းသူပြည်သားများ လွန်စွာရှုတ်ထွေး၍ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ နားမလည်နိုင်သောပထမချက် ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုး သန်းပေါင်း ၆၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်သော သဘာဝ သယံဇာတများလွန်စွာပေါကြွယ်ဝသည့် ကချင် ပြည် နယ် ကဲ့ သို့ သော အထင်ကရ နေရာဒေသတခုတွင် ထိုလူမျိုးစုအကုန်လုံး အတွက် အဓိက အသက်အာမခံမှုကို အထောက်အကူပြုပေးနေသော မြစ်ဧရာဝတီ ရေ၏ ၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းကို နှစ်စဉ်ပိုင်နိုင်စွာသုံး၍ ရင်းနှီး လုပ်ကိုင် မည့် အခွင့် အရေးအား တိုင်းသူပြည်သားများ၏ ဆန္ဒမရှိဘဲ တရုတ်ပြည်သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရရှိကိုင်ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါသနည်း။
ထိုရေကာတာစီမံကိန်းမှ ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်အား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတရုတ်ပြည်သည် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရယူ ပိုင်ဆိုင် သွားမည် ဟုအတိအလင်းဆိုထားသည် ၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် အစိုးရအကြီးအကဲများမှလဲထိုစီမံကိန်းသည် မြန်မာအမျိုးသားများ၏ ငွေကြေးအင်အား ၊ နည်းပညာ အင်အားဖြင့် မတည်ဆောက်နိုင်၍ တရုတ်တို့ ၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ရပါသည်ဟုဆိုလျှင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအား စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်အကူအညီ ပေးလိုသော တရုတ်ပြည်ထံမှ ထိုကုန်ကျမည့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ငွေကြေးပမာဏကို အတိုး သက်သက်ဖြင့်သာ ချေးယူ၍ မရခဲ့ပါသနည်း။
မြန်မာနိုင်ငံအား ထိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ထွက်ရှိလာသော အကျိုးအမြတ်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခံစားစေမည် ၊ စီမံကိန်း အောင်မြင်ပီးနောက် လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ ရရှိ မည်ဟူသော အချက်များသည် ပေးအပ်လိုက်ရသော သဘာဝ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသော နယ်မြေ နှင့် ၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းသော မြစ်ဧရာဝတီ၏ သွေးသားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါလျှင် ထိုက်တန်သည်ဟု မည်သည့်နည်းနှင့် ယူဆထားပါနည်း ။
ဤသည်မှာ တရုတ်ပြည်သည် ထိုသူတို့ ၏တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက်တည်ဆောက်သော လျှပ်စစ် ရေကာတာ စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာ့နယ်မြေကိုငှားရမ်းခ ၊ မြန်မာနိုင်ငံအသက်သွေးကြောမကြီးအား ထုတ်ယူသုံးစွဲခအား ဤမျှလောက်သော တန်ဘိုးပမာဏလေးဖြင့် ပိုင်းဖြတ်သွားသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ရရှိ လာမည့် အကျိုးအမြတ်ကို ခံစားရယူခွင့်မဆိုထားဘိ . ပေးအပ်လိုက်ရသော ရင်းနှီးမှု၏ အရှုံးသည်ပင် မြင့်မိုရ်တောင်မက ကြီးမားနေသည်မှာ ထင်ရှားပေသည် ။
ထို့ ကြောင့် ဤစီမံကိန်းကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားများ၏ ဆန္ဒမပါပဲ လက်ခံခဲ့ပါသနည်း။
ဤမေးခွန်းများသည် ကျမကိုယ်တိုင် အပါအဝင် တိုင်းသူပြည်သားများမှ တိကျရေရာစွာ သိချင်နေသော မေးခွန်းများပင်ဖြစ်ပေသည်။
(၂)နိုင်ငံတခုနှင့်တခု စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးများအားလုံးအတွက် အပြည့်အဝ ပြန်လည်အစားထိုးပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံတခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အာမခံချက် (Political Risk Insurance )
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှ တခြားတနိုင်ငံသို့စီမံကိန်းတခု (သို့ မဟုတ် )တခုထက်ပိုသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်ခန့် အပ်ခြင်း ခံရမည်ဆိုပါလျှင် ထိုသို့ ခန့် အပ်ခြင်းခံရသူ (ယခု အခြေအနေအရ တရုတ်ပြည် - Contractor ) သည် ခန့် အပ်သူ ( ယခု အခြေအနေအရ မြန်မာပြည်- Owner ) အား လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှုများ ၊ နောက်ဆက်တွဲ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ အားလုံးအတွက် အပြည့်အဝ ပြန်လည်အစားထိုးပေးနိုင်ပါသည်ဟု တိကျစွာဆိုထားသော အာမခံမှုစာချုပ် (Political Risk Insurance Contract )အား အာမခံပေးမည့်နိုင်ငံ (ယခု အခြေအနေအရ မြန်မာနှင့်တရုတ်မဟုတ်သော တခြား စီးပွားရေးတောင့်တင်းသည့် နိုင်ငံ - Insurance Broker) ထံမှ ဝယ်ယူပေးရမည်။
ထိုစာချုပ်( Political Risk Insurance)တွင် ပါဝင်ရမည့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်မည့်အခြေအနေများကို ကျွမ်းကျင်သော (တရုတ်မဟုတ်သည့်) နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်များနှင့် မြန်မာပညာရှင်များ ပူးပေါင်းကာ အာမခံပေးမည့်နိုင်ငံ ( Insurance Broker )
အား ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမည့်အချက်များကို ရေးသားဖော်ပြရာ၌ အဓိကအားဖြင့်းပညာပိုင်းဆိုဟူသော အချက်အလက်အားလုံးကိုလဲ အဆင့်ဆင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြရပေမည်။
သို့ သော် စီမံကိန်း မစမှီ
မြန်မာအစိုးရသည် လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း နေထိုင်နေသူ အားလုံးထံမှ မည်သည့်ခြိမ်းချောက်မှု ၊ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမှ မပါသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးထဲမှ တပါးအပါအဝင်ဖြစ်သော "တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး " ဆိုသည့်အချက်ကို အလေးထားဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် ရှေးဦးစွာ ရယူရပေမည်။ သို့ မှသာ Political Risk Insurance Contract ကို Insurance Broker ထံတွင် Contractor (တရုတ်ပြည်)မှ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံ (Owner) သို့ သေချာစွာ ပေးအပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျမ၏ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ၊ နည်းပညာပိုင်းအရ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်မည့် ခန့် မှန်းချက်အခြေအနေများနှင့် ယခုလက်ရှိ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ စိုးရိမ်မှုအတိုင်းအတာ ၊ အခြေအနေများအရ Insurance Broker မှ တာဝန်ယူ အာမခံပေးရမည့် အချက်များအား ယေဘူယအားဖြင့် ဖော်ပြရသော်....
(၁)စီမံကိန်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သော နေရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နယ်မြေ အနေအထားဆိုင်ရာပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ မရှိနိုင်ပါဆိုသည့် အာမခံချက်
(၂)ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ (Contractor) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို တာဝန်ယူ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည် ဟူသော အာမခံချက်
မြစ်ထဲသို့ စွန့် ပစ်သော ဓါတုပစ္စည်များကြောင့် မြစ်ရေ မသန့် ရှင်းမှုဖြစ်ကာ တိရိစ္ဆာန်များ ၊လူများ သေကြေပျက်ဆီးမှုမရှိခြင်း ဟူသော အာမခံချက် ၊
နှစ်စဉ်သုံးစွဲနေသော ရေအင်အား ၇.၆ရာခိုင်နှန်းသည် တိုင်းပြည်တွင် နေထိုင်သော ပြည်သူပြည်သား သန်း ၆၀ကျော်၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပါ ၊
သောင်ထွန်း၍ မြစ်ကြောင်း ပြောင်းခြင်းများလဲ မရှိပါ ဟူသော အာမခံချက်များ
(၃)အကယ်၍ ထိုစီမံကိန်းကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်ဆီးခဲ့ပါလျှင် ထိုပျက်ဆီးသွားသော တိုင်းပြည်အတွက် နောက်ထပ် တိုင်းပြည်အသစ် တခု ပြန်လည်အစားထိုးပေးနိုင်ပါသည် ဟူသော အာမခံချက်
(၄)နောက်ဆုံးတွင် တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ- Contractor ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောကြ နှစ်ခြိုက်ခြင်း မရှိ၍ တတိုင်းပြည်လုံးနီးပါး ဆန့် ကျင်ခဲ့ပါလျှင် စီမံကိန်းစာချုပ်အား လွယ်ကူစွာ ဖျက်သိမ်းပေးရန် အာမခံပါသည်
သို့ အတွက်ကြောင့် မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော သမ္မတကြီးနှင့် ထိုစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည် ဖော် ဆောင်နေသော အထက်လူကြီးများသည် တိုင်းသူပြည်သားတို့ သဘောကြနှစ်ခြိုက်ခြင်း မရှိသော ၊ ဆန့် ကျင် နေ သော ၊ စိုးရိမ်ထိန့် လန့် နေသော ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ဆိုးကျိုးများ ၊ အခြေအနေများ အားလုံးသည် ဖြစ်လာဖွယ်ရာ မရှိပါဟူသည့် ဖြေရှင်းချက်ကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထား၍ ပြည်သူများ၏ မလိုအပ်သော စိုးရိမ်မှုများအား အတွေးထဲမှထုတ်ပြစ်လိုက်ပါဟူသည့် ဖြေသိမ့် ရှင်းလင်းချက်များကို ရေးသားဖော်ပြနေမည့်အစား Contractor မှ ဝယ်ယူပေးအပ်ထားသည့် Original Political Risk Insurance Contract အား တိုင်းသူပြည်သားများ လွယ်ကူစွာ သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါမလိုအပ်သော အခြေအနေများကို ဖယ်ရှားနိင်ပေမည်။
၄င်းတို့ မှာ -
(၁) တရုတ် - Contractor သည် ၄င်းလုပ်ဆောင်ရမည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုင်းသူပြည်သားများ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် အေးဆေးစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။
(၂) တိုင်းသူပြည်သားတို့ သည် ယင်းတို့ ၏ မလိုအပ်သော စိုးရိမ်မှုများကို လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားနိုင်၍ နေ့ စဉ် ပြု လုပ်ရ မည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အေးဆေးစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။
(၃) တိုင်းသူပြည်သားတို့ ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိ၍ တရုတ်နှင့် မြန်မာကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုလဲ ပိုမို ခိုင်မာစေမည်။
(၃)ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင်ထားရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့် တိုက်ရိုက်မပတ်သတ်သော သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေး အာမခံချက် ( Bnker's Guarantee from World Bank )
ဤအချက်သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ တရုတ်ပြည် (Contractor) ၏ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်သော ဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များမှ တခု သို့ မဟုတ် တခုထက်ပိုသော အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသော အခါတွင် ၊ သို့ မဟုတ် ငြင်းဆန်သော အခါမျိုးတွင် မြန်မာပြည် (Owner) မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင် ထားရှိသော ငွေကြေးအား ရယူပိုင်ခွင့်ရှိပါသည် ဆိုသော ဘဏ်၏ အာမခံချက်သဘောတူ စာချုပ်အား ရယူထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည်လည်း တိုင်းသူပြည်သားတို့ အား စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်၍ စီမံကိန်းကို အကောင် အထည် ဖော် ရာတွင် လွယ်ကူစွာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ပေမည်။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာ ၃ချက်အား စီမံကိန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် အထောက်အထားနှင့်တကွ ပါရှိသော စာမျက်နှာများ ၊ ခိုင်လုံသော သက်သေများသည် ယနေ့အချိန်အခါတွင်အစိုးရသတင်းစာများမှရေးသားဖော်ပြလျှက်ရှိနေသော
နည်းပညာပိုင်းပိုင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များ ၊ အားပေးနှစ်သိမ့်မှုများ ထက်ပိုမိုထိရောက်စွာသန်း ၆၀ ကျော်သော ပြည်သူပြည်သားတို့ ၏ မလိုအပ်သောစိုးရိမ်ထိတ်လန့် မှုအား ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်ပေလိမ့်မည်ဟု ကျမယုံကြည်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုထားသော အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ပစ္စည်းများ ၊နည်းပညာ များသည် လူသန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်သော မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးအား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လေ့လာစစ်ဆေးခွင့်ရနိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ လေ့လာစစ်ဆေးခွင့် ရနိုင်သည် ဆိုစေကာမူ ထိုသန်း ၆၀ ကျော်သော တိုင်း သူပြည် သားအားလုံးတို့ သည် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို နားလည်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
သို့ ပါသောကြောင့် တရားစောင့်သော သမ္မတကြီးသည် တိုင်းသူပြည်သားတို့ ၏ဆန္ဒဖြင့်ရွေးချယ်တင် မြှောက်ထား သော မင်း/သမ္မတ တဦး ဖြစ်သည်နှင့် လျှော်ညီစွာတိုင်းသူ ပြည်သားတို့ ၏အကျိုး နှင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ တိုင်းသူပြည်သားတို့ ၏ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် မှုနှင့် နှလုံးစိတ်ဝမ်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းများကို တိုင်းပြည် အေးချမ်းသာယာရေးကို ရှေးရှု၍ သုတ်သင်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းတည်းဟူသော လုပ်ဆောင်မှုများကို မျှော်လင့် အားကိုး၍ လူသန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်၏ ဆန္ဒနှင့်ထပ်တူကျသော ယခုစာကို သမ္မတကြီးအား ပေး ပို့ လျှောက်ထားလိုက်ပေသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် ကျမတို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြသည့် လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်း မကျန်သော သက်ရှိသက်မဲ့ သတ္တဝါအားလုံးတို့ သည် ဘာသာတရားထွန်းကားသော တိုင်းပြည်၏
အရိပ်အာဝါသအောက်တွင် တည်ရှိကြသူများဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ သည်းခံခြင်း ပါရမီနှင့် အလွန်တရာ ပြည့်စုံကြွယ်ဝကြပေသည်။
သို့ သော် " အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး" ဟူသောမြန်မာပြည်ဖွား နိုင်ငံသားတိုင်း လေးစားလိုက်နာရမည့်တာဝန်တရပ်အား ကျေပွန်ခြင်းငှာ မိမိတိုင်းပြည်ပျောက်ဆုံးပျက် ဆီး မည့်အရေးကို ကာကွယ်လိုခြင်း ၊ တိုင်းပြည်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် တိုင်းသူပြည်သားတို့ ၏ လက်ဝယ်တွင် မရှိဘဲ တိုင်းတပါး၏ စီမံအုပ်ချုပ်ခံတိုင်းပြည်သို့ ရောက်ရှိမည့် အရေးအား ကာကွယ်ခြင်းလိုတည်းဟူသော အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များကား မိမိအသက်ထက်ပိုမို၍ လွန်စွာ ရှင်သန်နိုးကြားလှပေသည်။
သို့ ပါသောကြောင့် တရားစောင့်သော သမ္မတကြီးသည် တိုင်းသူပြည်သားများအား သနားကြင်နာသောအားဖြင့် ကျမတို့ တိုင်းပြည်တွင် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော မြစ်ရေကာတာ စီမံကိန်းများနှင့် ဆက်လျှဉ်း၍ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့် မှုများအား မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးနှင့် လျှော်ညီစွာ လိုအပ်သလို ဖယ်ရှားသုတ်သင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပေသည်။
"ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရှိ တိုင်းသူပြည်သားများသည် တိုင်းတပါး၏ အနည်းငယ်မျှ ပေးကမ်းစွန့် ကြဲသော ချမ်းသာမှုများကို ရရှိခြင်းထက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍ ဆင်းရဲနေခြင်းအားပိုမိုလိုအပ်လှပေသည်။"
(မှတ်ချက် - ကျမသည် ယခု အချိန်အထိ အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအား ဆန့်ကျင်နေသည့် မည်သည့် ပါတီ၊ အဖွဲ့ အစည်းနှင့်မျှ ဆက်စပ်ခြင်း၊ တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းများ မရှိခဲ့ကြောင်းကို ရှင်းလင်းရိုးသားစွာ သစ္စာကတိပြုပါသည်)
Notes: Forward Mail ကရတာလေးပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
Posted by Alex Aung at 11:57 AM No comments:
ရန်ကုန်၊ဇူလိုင် ၁၄ - အိမ်ခြံမြေတွေအ၀ယ်လိုက်လာတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားသားကနေ မြန်မာတစ်ဦးဦးအမည်ခံနဲ့ဝယ်တာလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေရှိလာကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေက အမည်ခံနဲ့မြေကြီးတွေကို နေရာကောင်းတွေမှာ ၀ယ်တဲ့အတွက် မြန်မာတွေ ကတော့ မြို့စွန်ထွက်ကြရ တယ်ဆို တာတွေ ပြောဆိုကြတာရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဥပဒေအရ အိမ်ခြံမြေကို နိုင်ငံခြားသားဝယ်ယူခွင့် ရှိမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတာကို အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်လတ် ကို သူ့ရုံးမှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာတွေထဲက အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။
မော်ဒန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ဘယ်လို လူမျိုးတွေက မြေ၀ယ်ယူခွင့်ရှိပါသလဲဆရာ။
ဦးမောင်မောင်လတ်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်က လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၁)နဲ့ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အဲသည်နှစ်မှာ နည်းဥပဒေတွေကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၈၇ နဲ့ ပြည်ထဲရေးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၇ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၁)ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ ၁၉၄၇ခုနှစ်က မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်း ကန့်သတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ နည်းဥပဒေ ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ ၁၉၈၇ခုနှစ် ပြဋ္ဌန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေက အသက်ဝင်ကျင့်သုံးနေတုန်းပဲ။ အဲသည်ဥပဒေအရဆိုရင် လက်ရှိမှာ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူခွင့်ရှိသူများသည် (နိုင်ငံသား)၊ (ဧည့်နိုင်ငံသား)နဲ့ ပြုနိုင်ငံသား(နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ) တို့ ဖြစ်တယ်။ ဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့ပြုနိုင်ငံသားကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့ ပြုနိုင်ငံသားတွေ ကို နိုင်ငံသားအဖြစ်က ရပ်စဲခြင်းခံရရင်တော့ နိုင်ငံခြားသားပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကျ ခံရရင် ရပ်စဲသွားနိုင်တယ်။
မော်ဒန်။ ။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါ။
ဦးမောင်မောင်လတ်။ ။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာ မြေ၊ မြေမှ ဖြစ်ထွန်းတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ မြေ၌ဆောက်လုပ်ထားသော သို့မဟုတ် တည်ရှိသော အဆောက်အအုံနဲ့ အရာဝတ္ထုများ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၌တပ်ဆင်ထားသော အရာဝတ္ထုတွေကို ဆိုလိုတယ် ဆိုပြီး ပါရှိတယ်။
မော်ဒန်။ ။ သည်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို အမည်ခံနဲ့ဝယ်ယူထားပြီး နိုင်ငံခြားသားကတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူထားတာလို့သိရင် တရား စွဲဆိုလို့ရပါသလား။
ဦးမောင်မောင်လတ်။ ။ တရားစွဲချင်ရင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို အရင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းရတယ်၊ ဥပဒေနဲ့အညီ အမွေဆက်ခံခွင့် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းလို့ရတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ရင် ရက်ပေါင်း၉၀အတွင်း အယူခံခွင့်ရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်နဲ့အကျိုးတူ ကိစ္စရပ်တွေအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင် သည်ဥပဒေနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ပုဒ်မ ၁၅အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်။
ဥပဒေအရနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းကို ကာကွယ်ထားတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်။ အမည်ခံပြီး ၀ယ်ရင် အမည်ခံပေးသူကလည်း ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းနိုင် တယ်။ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံပြရင်တော့ တရားစွဲဆိုနိုင်တယ်။ ဥပဒေအရကတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေး ထားတာမျိုး။
မော်ဒန်။ ။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေကရော နိုင်ငံသားအမည်ခံဝင်ပြီး ၀ယ်ပေးတဲ့အခါ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ရင် ငြိနိုင် ပါသလားဆရာ။
ဦးမောင်မောင်လတ်။ ။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကတော့ ရောင်းသူ၊၀ယ်သူဆီကလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေတောင်းမှာပဲ။ ၀ယ်သူ က လိပ်စာ၊ မှတ်ပုံတင်၊ နိုင်ငံသားဆိုတာကို ပြရမှာလေ၊ နိုင်ငံသားအမည်ခံပေးသူက အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဆိုရင် စာချုပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ အမည်ခံပြီးဝယ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံသားကတော့ တရားဝင်သွားတာမျိုး အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ အားပေးကူညီသူအနေနဲ့ မငြိနိုင်ဖို့ဆိုရင် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို တောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံခြားသူ တစ်ဦး ဦးက မြန်မာအမျိုးသား၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဦးနဲ့ လက်ထပ်ပြီး အဲသည်မြန်မာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နာမည်နဲ့ဆိုရင်တော့ မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ယူလို့ရတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ ဆရာ့အနေနဲ့ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပြပေးပါ။
ဦးမောင်မောင်လတ်။ ။ နိုင်ငံခြားသားကို အိမ်ငှားရင်တောင် ဗီဇာတို့၊ ပတ်စ်ပို့စ်တို့နဲ့ဆိုရင် တစ်နှစ်ပဲငှားလို့ရတယ်။ တစ်နှစ်ပြီးနောက် တစ်နှစ်ထပ်ချုပ်ရင် renew လုပ်ပြီးချုပ်ရတယ်။ ဥပဒေကတော့ နိုင်ငံခြားသားကို အမည်ခံပေးပြီး ၀ယ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံသားက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နိုင်ငံခြားသားပြန်မလာနိုင်ရင် အမည်ခံသွားသူက အကျိုးခံစားခွင့်ရသွားတာမျိုး။
မော်ဒန်။ ။ အခုလိုအချိန်ပေးဖြေကြားပေးတဲ့ဆရာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Credit: မော်ဒန်သတင်းဂျာနယ်၊ ၂၂ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၁
Posted by Alex Aung at 5:07 PM No comments: